Ciidammo ka tirsan dowladda Philippines oo lagu laayay duqeyn loo waday mintidiin - BBC News Somali
Ciidammo ka tirsan dowladda Philippines oo lagu laayay duqeyn loo waday mintidiin
1 Juunyo 2017
Image caption Duqeynta Philippine soldiers
Toban askeri ayaa ku dhimatay duqayn ay dowlada ka fulisay magaalada Marawi ee ay ku dagaalamayaan ciidamada Philippine iyo kooxo mintidiin Islaami ah.
Sideed askari ayaa sidoo kale ku dhaawacantay duqayntni oo si kama ah u dhacday sida uu shaaca ka qaaday xoghayaha gaashandhiga Philippine Delfin Lorenzana.
Todobaadyadii dhawaa kooxo mintidiin ah oo gacan saar la leh kooxda la magac baxday Dowlada Islaamiga ayaa ciidammada dalkaasi kula dagalamayay magaalada Marawi waxaana ku dhintay in ka badan 100 qof.
Dagaaladan ayaa waxa ay yimideen ka dib markii ciidamada ay isku dayeen in ay soo qabtaan hogaamiyaha sare ee kooxdani mintidka ah .
"Shalay waxaa nagu dhacday masiibo ay ku lug lahaayeen ciidamadeenna. Milatariga ayaa saaxibbadooda si aan ula kac ahayn u duqeeyay,waxaa naga dhintay 10 askari, 8 kalana way ku dhaawacmeen", waxaa sidaasi warbaahinta u sheegay Mr Lorenzana.
Madaxwayne Rodrigo Duterte ayaa todobaadkii hore xaalad degdeg ah ku soo rogay jasiirada Mindanao, oo ah goobta ay ku taallo magaalada Marawi.
Ciidamada ayaa qaaday weerar si ay gacanta ugu soo dhigaan Isnilon Hapilon oo ah nin mintid ah oo u dhashay dalka Philippines islamarkaana ku jira liiska dadka uu Maraykanku sida wayn u baadi goobaya loogana shakisan yahay argagixisnimo.
Xukuumada ayaa sheegtay in tiro ka mid ah dagaalyahannada ay dagaal xooggan la galeen milatariga si ay u difaacaan Isnilon Hapilon .